Toerana momba ny Norvezy. Momba Ny Norvezy - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Fanjakan Norvezy - ny firenena fjords, nahasarika ny an'arivony ny mpizaha tany noho ny hatsaran-tarehy voajanahary, ny firenena izay ny mpifindra monina dia mpitsoa-ponenana afaka nahita asa, ary ny mpianatra mba hahazo fampianarana, ny firenena iray manan-karena, mahaliana ny tantarany ary ny fiteniny dia am-polony maro ny tenim-paritraAo amin'ny tranonkala ianao dia afaka ny hahazo vaovao rehetra momba ny Norvezy: vinavina ho an'ny Oslo sy ny zavatra Krone tahan'ny fifanakalozana manohitra ny Euro, ny vidin'ny trano any an-drenivohitra, na ao amin'ny hafa ny zavatra tanàna, demography sy ny toe-karena, ny rafi-pampianarana sy ny asa ao amin'ny orinasa ny Norvezy, ny fomba amam-panao ny fitsipika sy ny lalàna momba ny hetra, ny fifindra-monina ary ny zavatra maha-olom-pirenena.
Raha toa Ianao ka mpianatra izay nanapa-kevitra ny hianatra any amin'ny malaza zavatra Oniversite, na mitady asa any Norvezy, izay mitaky fahalalana ny norveziana, dia nifidy ny tena mahaliana ny boky, rakibolana, ny teny norvejiana sy ny rohy mankany amin'ny vohikala ny zavatra Aterineto, izay ny fandalinana tsy ho mora sy haingana.
Mitady mpandika teny nandika ny taratasy avy amin'ny zavatra namana na ny tahirin-kevitra amin'ny iray amin'ireo Pianakaviana fiteny? Afaka manampy amin izany. Ny mpizaha tany, fa izay Norvezy dia iray amin'ireo hevitra ireo Pianakaviana niainany, dia afaka mahita ny tranonkala vaovao, mahasoa ho an'ny mpandeha: ny visa sy ny pasipaoro, ny vidin-javatra ireo na hafa karazana tours ny Skandinavia, ny fivezivezena ny sampan-draharaha, Ambasady ny Norvezy, ny hitan'ny olona fa tokony hitsidika rehefa nandeha ny alalan Norvezy. Ankoatra ny"fomba ofisialy"eo amin'ny tranonkala dia namoaka ny votoaty namorona ny mpampiasa: lahatsoratra sy tantara momba ny fiainana any Norvezy, ny vaovao sy ny sary. Raha mipetraka any Norvezy na vao niverina avy iray hafa manodidina-lavitra any, afaka mizara tantara iray momba ny diany, na ny mandefa sary ny toerana misy.
Ny ankamaroan'ny mponina sy ny vahiny amin'ny firenena tia manjono any an-dranomasina, na dia ony sy ny farihy fanjonoana ihany koa no tena mahazatra.
Miaraka amin'ny fandinihana ny hatsaran ny fjords, maro be ny mponina eto, ny karazana trondro, nanjono tany amin'ny zavatra ranomasina no tena sarobidy tao ny tena mpanarato za-draharaha. Drammen dia tanàna ao Buskerud ny fivondronan i Norvezy sy kaominina any amin'ny efapolo kilometatra miala ny renivohitra Oslo. Jan sivy ambin'ny folo ny Drammen dia mifandray Suger sy ny kaominina dia nafindra avy Vestfold County ny Buskerud.
Ny tanàna onenan'i ny dimy amby roapolo olona, dia ny tanàna lehibe indrindra any Norvezy.
Lillehammer dia hita ao amin'ny Faritr'i Oppland, valo ambin'ny folo km Avaratr'i Oslo. Ny tanàna nandray maneran-tany ny laza taorian'ny fampiharana ny lalao Olaimpika ao Ririnina sivy ambin'ny folo amby roa-polo, Tamin'ny Lillehammer dia misy ny roa-polo ny olona. Ao amin'ny afovoan-tanàna feno hazo ny trano izay naorina tamin'ny taonjato faha.
Dia manolotra fomba fijery mahafinaritra ny lehibe indrindra any Norvezy, lake Mjøsa sy ny renirano Lågen, voahodidina an-tendrombohitra avo.
Kristiansand dia ny renivohitry ny faritanin'i vest-Agder any amin'ny faritra atsimon'i Norvezy. Kristiansand dia ny tanàna lehibe indrindra an'i Norvezy amin'ny mponina ny olona tamin'ny janoary roa-polo taona. Ny anarana an-tanàna ahazoan'ny Mpanjaka Kristianina, izay iray nanorina ny tanàna. ny anaram-boninahitra mampahatsiahy ny fasika Saikinosy eo izay tanàna miorina. Mandra-pahatongan'ny valo ambin'ny folo anarana nanoratra tao amin'ny alalan'ny. Taorian'ny fanavaozana ny tsipelina ao amin'ny fanoratana ny valo ambin'ny folo nahazo amin'ny endrika ankehitriny. Teny an-dalana, araka ny tokony ho antsoina hoe ny tanànan Kristiansand, fa endrika ity dia ho mazava ny antony tsy tratra ao amin'ny teny norvejiana.
falleg kona. Ef þú hefur ekki enn ákveðið, þú hefur
mba hitsena ny lehilahy amin'ny chat roulette an-tserasera avy amin'ny finday maimaim-poana velona stream lehilahy Chatroulette adult Dating lahatsary ny ankizivavy video internet tsy misy fisoratana anarana online Dating video fantaro adult Dating free video jereo ny lahatsary amin'ny chat